David Cameroon oo Sheegay in Ciidamo u dirayaan Soomaaliya – Radio Daljir
David Cameroon oo Sheegay in Ciidamo u dirayaan Soomaaliya
Seteembar 28, 2015 3:16 b 0
Isniin, September 28, 2015 (Daljir) —Dowladda wadanka Britain ayaa cadaysay inay boqolaal saraakiil ah oo kamid ah ciidamadeeda usoo dirayso dalalka ay colaaduhu hareeyeen ee Soomaaliya iyo Koonfurta dalka Suudaan, si ay tababar u siiyaan ciidamada dowladahaasi.
David Cameron ra’iisul wasaaraha dowladda UK ayaa sheegay in ciidamada wadankiisa ee Imaan doona Soomaaliya iyo Suudaan ay caawin doonaan howlgalka Qaramada Midoobey ee Koonfurta Suudaan iyo howlgalka AMISOM ee Soomaaliya.
Ra’iisul wasaaraha ayaa sheegay in in kabadan 70 sarkaal usoo dirayaan Soomaaliya, wuxuuna cadeeyey in ciidamada wadankiisu aysan ku biiri doonaan howlgalada ay wadaan ciidamada AMISOM laakiin ay kaliya tababar siin doonaan.
Tababarka ciidamadaasi ay bixin doonaan waxaa kamid ah dhanka dagaalka, injineernimada iyo arimaha caafimaadka, si ay ciidamada AMISOM u helaan khibrad ku aadan arrimahaasi, sida uu sheegay ra’iisul wasaare Cameron.
Dhanka kalena ra’iisul wasaare Cameron ayaa sheegay in dalka ugu yar caalamka ee Koonfurta Suudaan ay geyn donaan 250 kamid ah ciidamadooda, si ay dhanka tababarka uga caawiyaan ciidamada kujooga magaca howlgalka nabadda ee Qaramada Midoobey.
Mr Cameron ayaa ugu dambayntii sheegay in taageeradaani ay Soomaaliya ka caawin doonto dagaalka kadhanka ah ururka Alshabaab iyo sidoo kale sidii loo abuurilahaa fursad deganaansho oo lagu yaraynayo tahriibka iyo aafooyinka soo wajahan dhalinyarada.
Magacyada Xubnaha Golaha Deegaanka Degmada Bosaaso oo la Shaaciyay
RW Cumar oo ka Hadlay Colaadaha ka soo Cusboonaaday Gobolka Sool